ဒိန်ခဲနှင့်ဘေကွန်နှင့်အတူအာလူး, ပြင်ဆင်ထားရန်ရိုးရှင်းတဲ့ပန်းကန် | မီးဖိုချောင်သုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Montse Morote | 20/05/2021 09:01 | Hot Entries, Montaditos, ဘေးထွက်ပန်းကန်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဒိန်ခဲနှင့်ဘေကွန်နှင့်အတူအာလူး Foster ပုံစံ၊ အလွန်အောင်မြင်သောအမေရိကန်စတိုင်ပန်းကန်တစ်ခု။ ဒိန်ခဲနှင့်ဘေကွန် au gratin နှင့်အတူဤအာလူးအရသာရှိပါတယ်! အဆိုပါအာလူး၏ crispiness မုန့်နှင့်ဒိန်ခဲ၏ creaminess ဒီပန်းကန်ကိုတွန်းလှန်စေသည်။
Foster စတိုင်ဖြင့်ဒိန်ခဲနှင့်ဘေကွန်နှင့်အတူဤအာလူးပန်းကန်ကိုများသောအားဖြင့် ranchero ငံပြာရည်နှင့်အတူလိုက်ပါလေ့ရှိသည်။ ငါဒီငံပြာရည်မထည့်ပါဘူး, သူတို့ကသူတို့ရောင်းသည်ကိုငါသိ၏, သို့သော်ဤသည်အလွန်ကောင်းသောပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။
ညစာသို့မဟုတ်ရေစာအတွက်နှင့်အစားအစာကိုကျော်လွန်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဟင်းလျာ family မိသားစုတစ်ခုလုံးကြိုက်နှစ်သက်မည့်ပန်းကန်တစ်ခု။
၁၀၀ ဂရမ်။ Cheddar ဒိန်ခဲဖျက်စီး
100 ml ။ ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်မုန့်
၁၀၀ ဂရမ်။ diced ဘေကွန်
သံလွင်ဆီ 1 ဖန်ခွက်
ငါတို့ကအာလူးတွေကိုမုန့်ဖုတ်တဲ့ပန်းကန်ထဲထည့်လိုက်တယ်၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်လိုက်တယ်၊ မုန့်နဲ့ဖုံးအုပ်လိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ဒိန်ခဲတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးမီးဖိုထဲထည့်ပြီး gratine ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဒိန်ခဲကိုရွှေအရည်ကျိုမကျန်အောင်ထားခဲ့မယ်။
ထိုအစေခံရန်အဆင်သင့် !!! ချက်ချင်းအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်, ဒီလတ်ဆတ်တဲ့လုပ်ထားတဲ့ပန်းကန်အလွန်ကောင်းသည်, အာလူးအအေးတဲ့အခါမှာအတူတူမရှိကြပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » အပေါင်းအဖော် » Hot Entries » ဒိန်ခဲနှင့်ဘေကွန်နှင့်အတူအာလူး
luis gonzalo valverde ဟုသူကပြောသည်
luis gonzalo valverde အားပြန်ပြောပါ